Chọọ nsonaazụ maka «a» - Geofumadas
Chọọ rịzọlt maka "a"
AulaGEO bu atumatu nke ewuru kemgbe otutu oge, inye otutu usoro nkuzi banyere isiokwu dika: Geography, Geomatics, Engineering, Construction, Architecture na ndi ozo elebara anya na mpaghara nka. N'afọ a, usoro ihe omumu ihe omimi nke ihe omuma bu ...
INFRAWEEK 2021 - ndenye aha na-emeghe
Ndebanye aha dị ugbu a maka INFRAWEEK Brazil 2021, Bentley Systems 'ọgbakọ ogbako nke ga-enwe mmekọrịta mmekọrịta na Microsoft na ndị isi ụlọ ọrụ. Isiokwu afọ a ga-abụ "Otu ngwa nke ejima dijitalụ na usoro ọgụgụ isi nwere ikike iji nyere aka imeri nsogbu nke post-COVID ụwa ". INFRAWEEK mụrụ ...
Akụziri CAD / GIS, Microstation-Bentley
UMUAKA UAV EXPO AMERICAAS
Nke a na September 7,8, 9 na XNUMX nke afọ a, "UAV Expo Americas" ga-eme na Las Vegas Nevada - USA. Ọ bụ ihe ngosi ahia ahia nke North America na ogbako na-elekwasị anya na ijikọ UAS na azụmahịa na ndị na-eme ihe ngosi karịa ihe omume ọ bụla ọzọ. Na-ekpuchi isiokwu ...
Iji malite, ajụjụ dị mfe. Gịnị bụ ọgụgụ isi ebe? A na-enweta ọgụgụ isi ọnọdụ (LI) site na nyocha na nyocha nke data geospatial iji mee ka nghọta, ihe ọmụma, mkpebi na amụma. Site na ịgbakwunye ọkwa nke data, dị ka omume igwe mmadụ, okporo ụzọ, na ihu igwe, na maapụ dị mma, nzukọ ...
UNFOLDED: usoro ohuru maka njikwa data gbasara ohere
Na mbipụta nke 6 nke Twingeo Magazine, anyị nwere ike ịtọ ụtọ ihe ọhụụ ọhụrụ maka njikwa data gbasara ohere gbasara ohere gbasara Unfolded Studio. Ihe ngosi ohuru a nke, kemgbe February 1, 2021, na-eme ka ndị mmadụ kwuo banyere ngwaọrụ ndị ọ nwere maka njikwa na njikwa nke nnukwu ...
Lomalọma - BIM Ọkachamara Ọdịdị
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke usoro nhazi, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. Ndị na-achọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi usoro nhazi ya na usoro dị iche iche nke imewe, nyocha na nhazi nke ...
Remsors sensọ - Pụrụ Iche 6th. Mbipụta TwinGeo
Mbipụta nke isii nke Twingeo Magazine dị ebe a, ya na isiokwu bụ isi "Ihe mmetụta sensọ: nkuzi a na-achọ itinye onwe ya na ịme ngosipụta nke eziokwu nke obodo mepere emepe na ime obodo". Igosipụta ngwa nke data enwetara site na sensọ dịpụrụ adịpụ, yana atumatu niile, ngwaọrụ ma ọ bụ akụkọ metụtara njikọta ahụ, ...
Diploma - Ọkachamara Ndụ Ndụ
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ịhazi igwe, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi akpa na usoro ya dị iche iche nke ịme ihe atụ, nyocha na nkedo nke ...
Ubre - BIM ọkachamara ọkachamara
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa maka ịwube ihe owuwu, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha nwere obere sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi na mmefu ego na iche iche ha ...
Lomalọma - Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ obodo
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ọrụ obodo, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi nke ọrụ obodo na usoro dị iche iche nke nnweta, imewe ...
Ubre - Ala na-arụ ọrụ ọkachamara
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ịchọpụta ihe dịpụrụ adịpụ, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, nye ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi ozi mpaghara na usoro ndị ọzọ nke nnweta, nyocha na mkpofu ...
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke Geographic Information Systems, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ dị iche iche. Ndi ozo choro ime ka ihe omuma ha di nma, n'ihi na ha nwere ikike inweta ngwanrọ ma choo imuta ka ha tinye ihe omuma banyere uzo ozo nke nyocha, nyocha na ...
Tebụl oge maka nyocha gbasara ohere